DEG DEG:Ciidamada Somaliland oo heegan culus la galiyey & Gaadiid dagaal oo afka saaray dhanka magaalada….. – Puntlandtimes
DEG DEG:Ciidamada Somaliland oo heegan culus la galiyey & Gaadiid dagaal oo afka saaray dhanka magaalada…..
GAROWE(P-TIMES)- Wararka Warsidaha Puntandtimes.com uu hada ka helayo jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo dagaal kooban uu saaka ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa sheegaya in heegan xoogan la galiyey ciidamada Somaliland kadib markii weerarkii xalay iyo dagaalkii saaka ka dhacay duleedka deegaanka Tukaraq.
Saraakiisha ciidamada Somaliland ayaa amar lagu siiyey in ay kala qaybiyaan ciidamadooda isla markaasna ay horu uga yara guuraan saldhigii xalay ciidamada Jabhadda xoreynta gobolka Sool ay ku weerareen ciidamada Somaliland.
Gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lagu arkayaa furimaha hore, waxaana ciidamada Somaliland ay ku ruqaansadeen dhanka magaalada Garowe sida uu Puntandtimes.com u sheegay mid kamid ah dadka deegaanka Tukaraq.
Madaafiic dhowr ah iyo dagaal kooban ayaa saaka dhex maray ciidamada Somaliland iyo Puntland, kadib weerar xalay ay kala kulmeen ciidamada Somaliland Jabhadda xoreynta gobolka Sool.
Khasaaraha ka dhashay weerarkii xalay ayaa lagu sheegay dhimashada ilaa 5 askari oo ka tirsan ciidamada Somaliland iyo gaadiid dagaal oo laga gubay, waxaana dhanka Puntland dagaalkii saaka kasoo gaadhay khasaare ahaan dhimashada labo askar iyo dhaawac mid kale.
Xiisadaha deegaanka Tukaraq ayaa maanta kacsan, waxaana jiidaha hore laga soo sheegayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo hub urursi u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland.